Haween indho-shareer xirnaa oo lagu xiray magaalada Dhuusamareeb | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Haween indho-shareer xirnaa oo lagu xiray magaalada Dhuusamareeb
Haween indho-shareer xirnaa oo lagu xiray magaalada Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Ciidamada Dowladda ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ayaa Arbacadii maanta xabsiga u taxaabay gabdho, loo haysto inay wejiyada soo qarsadeen.
Ciidamada Dowladda ayaa gabdhahan ka dhex qabtay gudaha Magaalada Dhuusamareeb, xilli sida la sheegay ay xirnaayeen indho shareer.
Ciidamada Dowladda ayaana hablahaasi u kaxeeyay xarumaha ay ku leeyihiin Magaalada Dhuusamareeb, mana jirto cid ka hadashay xariga hablahaasi.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa indho shareerka looga mamnuucay awaamiir kol hore ka soo baxday Ahlu Sunada Galmudug, mudadii ay sida buuxdo uga arriminayeen magaaladaasi.
Saraakiisha Ahlu Sunna ayaa waxay xilligaa sheegeen in tallaabadaasi ay tahay mid looga hortaggayo suurtagalnimada in loo adeegsado falal liddi ku ah nabadgelyada magaalada.
Ma cadda waxa ay Ciidanka Dowladda ka yeeli doonaan hablaha ay ku xireen Magaalada Dhuusamareeb. Hablahan oo laba ah ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in ay dhawaan ka yimaadeen Magaalada Muqdisho.
Tani ayaa waxay ku soo aadaysa, xilli Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Madaxweynaha Maamulka Galmudug ee garabka dowladda, uu Saraakiisha Ciidamada faray in laga wada shaqeeyo amniga.
Waa markii ugu horeysay oo hablo loogu xiro indho shareer ay wateen gudaha Magaalada Dhuusamareeb, tan iyo markii ay amniga magaaladaasi la wareegeen Ciidamada Dowladda, bishii November ee sanadkii hore.
Waxaa xusid mudan in laamaha amniga Koonfur Galbeed ay sanado ka hor indho shareerka ka mamnuuceen in lagu dhex qaato Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay.
Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor)